Best Foundation yemahara kongiri batching chirimwa Mugadziri uye Fekitori |Macpex
Midziyo yenheyo yemahara kongiri yekusanganisa chirimwa inoshandura furemu pahwaro hweStandard kusanganisa chirimwa.Iyo furemu yakakora uye yakasimba.
1. Chimiro chechimiro che batching system yenheyo yemahara yekusanganisa chirimwa inowedzera kugadzikana uye kushushikana nzvimbo yemidziyo.
2. Iyo yekusanganisa unit uye metering unit inotora chimiro chechimiro, icho chakabatanidzwa pamwe chete nemabhoti, uye chikuva chekufamba chakabatanidzwa nehinge.Panguva yekufambisa, inogona kupetwa padivi pehinge point kuderedza nzvimbo yekufambisa.
3. Nzira yemagetsi inotora fomu yekukurumidza plug connector, iyo inoderedza kutenderera kwekugadzirisa kwemidziyo.
4. Maererano nehukuru hwesaiti, imwe yakanyatsokodzera kusanganisa simiti inogona kugadziriswa, iyo inogona kuitwa mu zigzag uye L-shape.
5. Inochengetedza nguva yakawanda yenheyo uye iri nyore kuisa.
6. Nheyo yemahara yekusanganisa chiteshi inonyanya kukodzera chiteshi chekusanganisa purojekiti, nekuti kuvakwa kwechiteshi cheprojekiti kunokurumidza, uye ichaendeswa kune inotevera nzvimbo yekuvaka pakupera kwenguva yekuvaka.Sement silo, inowanzokurudzirwa kushandisa yakachinjika simende silo kufambisa kufamba gare gare.
Hwaro hwemahara kongiri yekusanganisa chirimwa imhando nyowani yekongiri yekusanganisa chirimwa michina ine nyore kuisirwa, hapana chikonzero chekuvaka simende nheyo uye nyore disassembly uye kutamiswa zvichienderana nezvinodiwa uye mhinduro yevamwe vashandisi.
Hwaro yemahara yekusanganisa chirimwa zvakare shanu masisitimu, anosanganisira otomatiki kudzora sisitimu, zvinhu zvekuchengetedza sisitimu, metering sisitimu, yekufambisa sisitimu uye yekusanganisa sisitimu, kuitira kuti uone kusanganisa kugadzirwa kwekongiri.Pane mafomu maviri ekuvaka hwaro hutsva hwemahara hwekusanganisa chiteshi: mudziyo mhando nheyo yemahara yekusanganisa chiteshi uye simbi chimiro hwaro yemahara yekusanganisa chiteshi.
Iyo nheyo yemahara kongiri yekusanganisa chirimwa yakanakira kufambisa, kukurumidza kuisirwa uye nyore kutama.Inoshanda kune kusanganiswa kwekongiri kweakasiyana hydropower, nzira huru, chiteshi, airport, bhiriji uye mamwe mapurojekiti ekuvaka, pamwe nekuvakwa kwekutengesa kongiri yekusanganisa zviteshi.
Iyo nheyo yemahara yekusanganisa chirimwa inogona kuchengetedza yakawanda yenheyo nguva.Hakusi kuti nheyo haina kuitwa, asi nheyo haina kudzika uye yakaoma.Inoponesawo nguva yakawanda uye mari yenheyo.Izvo zvakare zviri nyore kufambisa saiti mune inotevera nhanho.
Mutengo we90 Yemahara Foundation yekusanganisa chirimwa uchatemerwa zvinoenderana nekupedzisira kumisikidzwa
Zvakapfuura: China HZS50 yakajairika yakamira kongiri batching chirimwa
Zvinotevera: Concrete kusanganisa chirimwa chinoshandiswa kune precast indasitiri
Yakatangwa muna 2010. Inyanzvi yekugadzira kongiri yemuchina zvigadzirwa.